Boqollaal ayaa u dabbaaldega 15 Janaayo, 1984 meelaynta astaantii u dambaysay si ay u cayinto Jidka Martin Luther King Jr. ga cusub ee Seattle. - HistoryLink.org
Boqollaal ayaa u dabbaaldega 15 Janaayo, 1984 meelaynta astaantii u dambaysay si ay u cayinto Jidka Martin Luther King Jr. ga cusub ee Seattle.
15 Janaayo, 1984, boqollaal qof oo heesaya ayaa ka soo lugeeyeen Kaniisadda Mount Zion Baptist ee Seattle ilaa isgooyska Sakadda E Cherry iyo Jidka Martin Luther King Jr.. Isku uruka kala duwani, sannad guuradan waxa loogu dabbaal degayey guulihii Dr. Martin Luther King Jr. (1929 – 1968) waxana la xusayay dhammaadkii dagaal sharciga ee dheeraa si magac cusub loo siiyo Habkii Imbaraadooriyadda ee dilista hoggaamiyeyaha xuquuqda aadamaha. 1981, fikrad fudud oo magac cusub loogu bixiyay halbawlaha wayn koonfurta Seattle waxa uu ka kiciyay dood kulul, magaalada oo idil. inkastoo ayna u kala hadhin golaha magaalada iyo maayarka ansixinta, sharciyayntii 1982 si loo beddelo biilasha yuutiliga, khariiradaha, foomamka, ashyaada suuqgaynta, iyo calaamaha sakadaha waxa dib u riday ugu dhawaan laba sano kiis sharciya ooy keeneen 36 ganacsade oo urur ku lahaa halbawlaha. Ganacsadeyaashu waxay ku sheegeen tabashadooda kharashka ku baxaya beddelka magaca waxayna ka doodeen awoodda magaalada ee ansixinta sharci iyadoon dadka waxa la waydiin. Ugu dambaytii, markay ku waayeen kiiskoodii Maxkamadda Sare ee Gobolka Washington Diisambar 1983, ganacsadeyaashii waxay go’aansadeen inayna rafcaan ka qaadan. Magaaladu waxay si dhakhso ah u soo saartay ilaa 500 calaamad sakadeed waxayna maaraysay inay qotomiso kahor maalinta u dambaysa oo ah 15 Janaayo.